Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 5 - Blockchain News
Anjara amin'ny sisiny varotra
Fanondroana ara-barotra dia iray amin'ireo tena mahasoa, fa tamin'izany andro izany ny tena mampidi-doza ho an'ny crypto tetikady mpivarotra. Io tetika ihany no mety tsara ho an'ny mpilalao za-draharaha izay vonona ny hahazo fatiantoka lehibe ara-bola.
In sisiny varotra, ny cryptotrader maka bola avy amin'ny broker, in ny tavany ny fifanakalozan-kevitra dia matetika indrindra-bola, amin'ny alalan'ny fanomezana ny habetsahan'ny ny niantoka – ny sisiny. Mandritra izany fotoana izany, mahaliana dia voampanga noho ny mampiasa ny findramam-bola. Noho izany, ny cryptotrader afaka amin'ny cryptocurrency vola mihoatra amin'ny mizana.
Misy roa lehibe ny sisiny variants varotra: dia lava toerana, na kilalao ho an'ny fitaizana, raha ny mpivarotra mametraka ny zava-misy fa ny crypto-pananana dia hitombo amin'ny vidiny, ary fohy toerana, na kilalao ho latsaka, rehefa mandeha ny tahan'ny ny zava-misy fa ny vidiny ho an'ny cryptocurrency dia hampihena. Na izany aza, raha ny vidin'ny iray crypto pananana midina ho zava-dehibe raha ny raharaham-barotra eo amin'ny fiakaran'ny, Ary rehefa tonga teboka iray fanakianana, ny mpivarotra rehetra dia afaka very ny petra-bola noho ny sisiny antso – noterena fanakatonana ny broker ny raharaham-barotra, raha toa ny mpivarotra tsy nanampy vola ny tantara. Raha ny vola nindramina dia tandindomin-doza, ny fifanakalozan-kevitra manan-jo deduct ny fatiantoka amin'ny tahirim-ny sisiny ny mpivarotra kaonty.
Misy tranga, rehefa mpivarotra, izay voalohany maintsy miatrika fatiantoka goavana, manapa-kevitra ny hanangana indray ny tahan'ny sy handresy ny toerana fa tsy manaiky fatiantoka. Izay matetika mitarika ho fatiantoka na dia lehibe kokoa.
Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 4 Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 1
NYC fifanakalozan Genesis ...
Previous Post:Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 4
Next Post:New toerana ao Quebec dia manomboka asa fitrandrahana Bitcoin
Mey 21, 2018 amin'ny 2:22 AM
Mey 29, 2018 amin'ny 2:15 AM
Mey 30, 2018 amin'ny 6:11 PM
Jona 3, 2018 amin'ny 2:08 AM
Jona 4, 2018 amin'ny 8:29 PM